Naya Drishti | डिभिजन वन कार्यालय सल्यान अगाडी सडकको दुर्दशा, सडकको भल पसेर स्थानीयको घर जोखिममा - Naya Drishti डिभिजन वन कार्यालय सल्यान अगाडी सडकको दुर्दशा, सडकको भल पसेर स्थानीयको घर जोखिममा - Naya Drishti
असार २०, सल्यान ।
कार्यालयको गेटबाट प्रवेश गर्न वित्तिकै सफा र सुन्दर कार्यालय परिसर, आकर्षक भवन हेर्दा जो कोहीको पनि वाक्य फुस्किन्छ की “आहा अफिस त चिटिक्कै रैछ ।” तर कार्यालय परिसर मात्र सुन्दर सफा भएर के गर्नु ? कार्यालयमा प्रवेश गर्दा नै पानी र हिलो ले भिजाइदिन्छ ।
यो खल‌गा डाडागाउँ स्थित डिभिजन वन कार्यालयको गेट अगाडीको अवस्था हो । गेट अगाडी सधैँ पानी जमिरहेको हुन्छ । कार्यालयमा प्रवेश कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरु यही जमेको पानी कुल्चेर गेट भित्र छिर्नुपर्छ । सवारी साधनहरुले पानी उछिट्याएर त्यत्तिकै हैरान । तर डिभिजन वन कार्यालयलाई कुनै वास्ता छैन ।
यहाँ निर जम्ने पानीको निकास नहुँदा छेउको घरमा समेत हानी पुगेको छ । वर्षेनी यसको पिरबाट पिरोलिएको स्वर्गीय निम बहादुर वलीको परिवार नगरपालिका र वन कार्यालयमा अनुरोध गर्दा गर्दा थाकिसकेको छ । तर न त नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन गरेको छ, न त वन कार्यालयले । घरको अगुवा स्व. निम बहादुर वलीको देहान्त पश्चात करिब एक वर्ष देखि यो घरमा काखे बच्चा सहित उनको श्रीमती, वलीको भाइ, वहिनी बस्दै आएका छन्।
स्व. वलीको परिवार भन्छिन “जमेको पानी निकास नभएपछि घर तिर पसेर यस पाली त पहिरो नै गयो ।” तर कसरी मर्मत गर्नु ? मर्मत गर्नलाई पर्याप्त पैसा पनि त छैन । उनीहरुको घरमा कमाउने कोही छैन । यस्तो अवस्थामा पनि यस बारे चासो नदिएको भन्दै स्व. वलीको बहिनी सीमाले धेरैपटक नगरपालिकामा लिखित र मौखिक अनुरोध गरे तापनि कुनै सम्वोधन नभएको गुनासो गर्छिन । भाई पद वली भन्छन् “दाजु जिवित हुँदै पनि नगरपालिकामा अनुरोध गरेको हो तर दाजु वितेर गए, समस्या समाधान भएन ।”
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रमेश कुमार गिरीले यो काम नगरपालिकाको दायित्वमा आउने बताएका छन् । हाल विद्यमान स्लयाव भत्काएर केही गर्दा पछि फेरी आफुलाई समस्या आउन सक्ने साथै आफनो अधिकार क्षेत्र भित्र पनि नपर्ने भएकोले वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । शारदा नगरपालिकामा यसको लागि दशौं पटक अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक जवाफ पाएको डिभिजन प्रमुख गिरीले बताए ।
अधिकार क्षेत्र ओगट्ने शारदा नगरपालिकाले पनि यसको व्यवस्थापनको लागि हाल सम्म ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा शारदा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश अधिकारी सँग सोध्दा आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रममा यसको व्यवस्थापन सम्पन्धमा पहल गरिने बताएका छन् । विगत धेरै वर्ष देखि यसको सास्ती भोग्दै आएको वली परिवारले अझै कहिले सम्म यो सास्ती भोग्ने ? यो तर्फ दुवै कार्यालय जवाफदेही हुनुपर्दछ ।
स्रोत : छिटो खवर
#वन कार्यालय #सडक
बालुवासंग्रही– कुपिन्डे– खलंगा सडक खण्ड केहि समय बन्द हुने, यस्तो छ बैकल्पिक बाटो